LALAO “PIZZAVORE” AN’NY RTA :: Nafotaka ny fihinanana “pizza” teny Andohalo - ewa.mg
LALAO “PIZZAVORE” AN’NY RTA :: Nafotaka ny fihinanana “pizza” teny Andohalo
Jeux - News - LALAO “PIZZAVORE” AN’NY RTA :: Nafotaka ny fihinanana “pizza” teny Andohalo
Notanterahina tamin’ny sabotsy lasa teo, tetsy amin’ny zaridainan’ny trano fisakafoanana Il Giargino Di Lorenzo, Andohalo, ny dingana voalohany tamin’ilay lalao ho an’ireo olona mankafy mihinana “pizza” na ny ” Pizzavore”, karakarain’ny RTA. Nanomboka tamin’ny 9 ora maraina ny fifantenana.
Mpifaninana maherin’ny enimpolo mianadahy no nifampikatroka tamin’izany. Fantatra nandritra io andro voalohany io ihany fa tafakatra amin’ny dingana manaraka ny antsasa-manilan’ireo mpifaninana. Toy izao ny fizotran’ny fifaninana nifehy ny lalao. Izay nahalany “pizza” maro indrindra ao anatin’ny fotoana voafetra, ary mihinana betsaka indrindra noho ny mpifaninana sasany no nivoaka mpandresy. Mbola hiatrika dingana telo vao tonga amin’ny famaranana, irao telopolo tafakatra.
“Sambany teto amintsika nisy fifaninanana mihinana “pizza” tahaka izao. Na tsy tafakatra ho amin’ny dingana mana­raka aza aho dia afa-po tamin’izao ezaka nataon’ny fahitalavitra Rta izao. Tsy vitan’izany fa nampiala voly anay tonga tety an-toerana ihany koa ny fanentanana sy karazan-dalao natolotry ny mpikarakara”, hoy ny mpifaninana iray milaza ny hafaliana. Amin’ity faran’ny herinandro ity indray ny fotoana manaraka ho an’ireo tafakatra sy ny mpankafy “pizza”.
L’article LALAO “PIZZAVORE” AN’NY RTA :: Nafotaka ny fihinanana “pizza” teny Andohalo est apparu en premier sur AoRaha.
Nivoaka tamin'ny : 03/12/2018
Kilalao - RTA
Kilalao Maxi Cube Multi-activité, ahafan’ny zaza mahita zava-baovao no miala voly
Goba (cube) lehibe iray ahafan'ny zaza iray manandrakandrana zavatra maro ny Maxi Cube Multi-Activités izay vokarin'i VTECH. Ny zaza dia afaka mampifanongoa ny goba (cube) maro eo ambonin'ny latabatra iray. Misy bokotra maro loko afa tsindritsindrina ihany koa eo amin'ilay Maxi Cube Multi-Activités, ka mamoaka feo sy hirahira izy ireo rehefa voatsindry. Io kilalao io dia mety ho an'ny zaza vao mahay mipetraka ary tia manandra kandrana. Ireo karazan-kilalao misy eo amin'ilay goba (cube) dia ahafahan'ny ankizy maro miara-milalao. Ny zaza efa lehibebe dia afaka ny milalao mahafantatra ny bikan'ny goba (cube) tsirairay, ary ny zaza mbola kely kosa dia afaka ny manindritsindry ny bokotra manana endrika biby na zavatra ka misy feo milaza ny anaran'ilay bokotra voatsindry. Ny zavatra hita eo amin'ilay Maxi Cube Multi-activités Ny Maxi Cube Multi-activité dia manana lafy 5 azo lalaovina : Misy tabilao famohazan-tsaina elektrônika mifandray zato isan-jato amin'ilay zaza. Misy tabilao tsy elektrônika. Misy kilaseran'endrika. Misy lafy iray misy lalana sy sakana maro ahafhaahana manisaka an'ireo goba (cube). Misy latabatra iray afaka hametrahana an'ireo goba (cube) maro. Kilalao iray izy ity izay manana zavatra maro izay mahaliana ny zaza maro, na kely izy na lehibe. Ny vokatsoa ho entin'io kilalao io ho an'ny zaza Ireto avy ny vokatsoa ho entin'io kilalao "Maxi Cube Multi-activité" ho an'ny zaza : Ilay zaza dia manomboka mamantatra ny litera, ny isa, ny endrika ary ny loko. Ireo karan-kilalao maro izay misy eo aminy dia mampianatra an'ilay zaza mba hampifandrindra ny fiasan'ny maso sy ny tanana. Ny lafy dimin'ilay goba (cube) dia mamela an'ilay zaza hahita karazana kilalao maro ary mampahery azy hanohy ny fizahana izay hataony. Ny goba (cube) litera dia mampianatra an'ilay zaza ny literan'ny abidy ary mampianatra azy ny manavaka azy ireo. Milalao an'ireo kanety kely, manindritsindry ny bokotra maro na ny mampirina an'ireo goba (cube) dia mampivoatra ny fihetsika ataon'ilay zaza.
Jeux - Jouet - News - News Mada
Na takon’ny fampielezan-kevitra sy ny raharaha politika aza ny fiainan’ny Malagasy, miezaka ny ho volon’andro fety ihany ny eny an-tsena sy ny an’ny tokantrano sasantsasany. Mirantiranty eny an-tsena ny ravaky ny Krismasy mamirapiratra. Mivoaka ihany koa ny kilalao ho an’ny kilonga. Efa manomboka mividy izany ny mpiantsena, saingy tsy mbola betsaka, raha ny filazan’ny mpivarotra. Mbola malaza ny dinety sy ny saribakoly ho an’ny ankizivavikely. Samy manana ny karazany sy ny habeny izy ireny. Manomboka amin’ny 5000 Ar ny tsotra indrindra ary tafakatra amanetsiny ireo tsara kalitao. Ny “overboard” kosa no malaza ho an’ny ankizilahy. Tsy misy latsaky ny 400.000 Ar anefa izy ireny. Ny sasany aza efa ny drone no andrandrainy ho azo, aterin’ingahibe Noely amin’ny alin’ny Krismasy. Lafo izy ireny kanefa misy ihany ireo ray aman-dreny vitsivitsy mahasahy mividy azy eny amin’ny magazay. Mionona amin’ny fiara kely sy kilalao madinidinika kosa ny ankamaroan’ny olona miatsena. Maro karazana rahateo izy ireny amin’ny tsenan’ny Sinoa ary mora sy takatry ny maro ny vidiny. Fantaro anefa fa misy koa ireo ankizy tsy misitraka kilalao izany mihitsy rehefa Krismasy fa miaina amin’ny zava-misy. Tatiana A L’article Fetin’ny Krismasy: mivoaka ny karazana kilalao a été récupéré chez Newsmada.
LALAO “PIZZAVORE” AN’NY RTA :: Hiatrika ny fifantenana voalohany ireo mpifaninana
Lasa izao! Hotontosaina rahampitso sabotsy, etsy zaridainan’ny trano fisakafoanana Il Giargino Di Lorenzo Andohalo, ny dingana voalohany amin’ilay lalao ho an’ireo olona mankafy mihinana “pizza” na ny ” Pizzavore”, karakarain’ny RTA. Hanomboka amin’ny 9 ora maraina ny fifantenana. Mpifaninana maherin’ny enimpolo mianadahy no hifampikatroka amin’izany. Marihina fa manana ny salan-taona eo anelanelan’ny valo amby folo ka hatramin’ny dimy amby enimpolo taona avokoa ireo mpandray anjara ireo. Ho mafimafy ny fandevonan-kanina ao anatin’ity sedra voalohany ity satria ny antsasa-manilan’ireo mpifaninana ihany no hiakatra amin’ny dingana manaraka. Toy izao ny hevi-dehibe mifehy ny lalao. Izay mahalany “pizza” maro indrindra anatin’ny fotoana voafetra, ary mihinana betsaka indrindra noho ny mpifaninana sasany no mivoaka mandresy. Mbola hiatrika dingana telo vao tonga amin’ny famaranana, izay voafantina amin’ny rahampitso. Hiova isaky ny dingana kosa ny fitsipika mifehy ny lalao, araka ny nambaran’i Naya Razafi, avy amin’ny RTA mpikarakara. “Tsy hitazam-potsiny akory ny olona ho avy hanatrika io fotoana. Hisy ny fizaràna ranom-boankazo samihafa avy amin’ny mpanohana ny fandarahana ho azy ireo. Maro ihany koa ny hetsika sy kilalao ankalamanjana izay mety hahazoana loka isan-karazany sahaza ny sokajin-taona rehetra eny an-toerana”, hoy hatrany i Naya Razafy. Maimaim-poana kosa ny fanatrehana ny lalao ho an’izay liana. L’article LALAO “PIZZAVORE” AN’NY RTA :: Hiatrika ny fifantenana voalohany ireo mpifaninana est apparu en premier sur AoRaha.